Momba anay - Beijing KES Biology Technology Co., Ltd.
Momba ny KES
Beijing KES Biology Technology Co., Ltd. no mpanamboatra fitaovana ara-pahasalamana sy hatsarana erantany any Shina, natsangana tamin'ny taona 1999, faritra 5000m2, orinasa 200+, tsipika famokarana 8, departemanta 18.
Ny fitaovana KES dia nahazo mari-pahaizana CE, TUV Medical CE, FDA, CFDA, RoHS. Anisan'izany ny IPL SHR, Elight, 808nm Diode Laser, Laser Laser miiba, Q Switch Laser, fampihenam-batana, Cryolipolysis, Laser Lipo, HIFU, Fitaovana fanaovana fanafody estetika fampiasana an-trano sns.
Ny fanamarinana dia manamarina fa ny fitaovana dia nandalo fitsapana fampisehoana sy fitsapana antoka kalitao, izany no dingana voalohany alohan'ny hisafidianan'ny mpanjifa fitaovana mety.
FSC (Certificate momba ny varotra maimaimpoana), ho an'i Thailand, Indonezia, Syria, Egypt, Colombia, Costa Rica, Arzantina ...
Free Sales Certificate (FSC) dia manaporofo fa mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny tsena fanondranana ireo fitaovana ara-pahasalamana, azo ampidirina sy amidy amin'ny tsena manafarana.
Ny departemanta R&D dia manana injeniera 20, traikefa 15 taona amin'ny fitaovana estetika fitsaboana, mamorona fitaovana vaovao ary manatsara ny fitaovana efa misy.
Teknolojia 12 hijerena ny kalitaon'ny singa sy ny masinina, 3rd ampahany ekipa mpanara-maso QC ho an'ny mpanjifa VIP, handefa fitaovana mifanaraka amin'ny mihoatra ny andrasan'ny mpanjifa.
Ekipa 10 mpitsabo, hopitaly miara-miasa 15, manome fisedrana klinika sy protokolon'ny klinika.
Mba hahazoana antoka fa azo antoka sy mahomby amin'ny olona ny fitaovana.
KES Supply Chain dia mahafeno tanteraka ny ISO13485: fitakiana rafitra fitantanana kalitao 2016, avela hanome fitaovana ara-pitsaboana izay mahafeno hatrany ny fepetra takian'ny mpanjifa sy ny lalàna mifehy.
Taorian'ny sampana serivisy dia ahitana injeniera 12, serivisy an-tserasera 7 * 24 ora, manome ny serasera anglisy, Russia, espaniola, japoney, arabo, fiteny sinoa. Ny vahaolana amin'ny manual na horonan-tsary dia homena ao anatin'ny 2 x24 ora.
Ny departemanta marketing dia mampiroborobo ny orinasanao ary mitondra ny varotra ny vokatra na serivisy omeny. Manome ny fikarohana ilaina izy io hahafantarana ireo mpanjifanao kendrena sy mpihaino hafa.
Fitaovana ara-barotra Manohana ny mpanjifa, misy Brochure, Video, Boky Torolàlana ho an'ny Mpampiasa, Boky Torolàlana ho an'ny Serivisy, Protocol Clinical ary Pricing Menu. Mba hamonjy ny fotoana sy ny vidin'ny famolavolana ny mpanjifa.
KES dia mandinika tsara ny valin'ny feedback an'ny mpanjifa, manao izay tsara indrindra izahay mba hamoronana ny traikefa ho an'ny mpanjifa tsara indrindra, ary hanatsara ny fitaovantsika sy ny serivisinay.
Fitaovana OEM & ODM ho an'ireo mpaninjara izay te-hamorona marika manokana amin'ny alàlan'ny fitaovana vaovao mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa ary manome toerana malalaka kokoa.